Qaab Howleed Qaran kaas oo ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dagaalka iska daysay.
Qaab Howleed Qaran kaas oo ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dagaalka iska daysay
Mogadishu, 15,August 2012 Dawladda Federaalka Soomaaliyeed iyo Amisom waxay daabaceen –qaab ama hawlgal cusub ee Qaran kaas oo ku wajahan dhalinta dagaalka iska daysay, kana soo baxday dagaalyahaiinta Al-shabab, Howlgalkana cusubna waxaa la soo hordhigay deeq bixiyayaasha markii uu socday shirkii Gudiga isku-xirka Amniga ee qabsoomay August-06, 2012.
Qaab howleedkan wuxuu u abuurayaa daka dagaalka sida rarsmi ah iskaga daayay in ay amni helaan , iyo sidii looga badbaadin lahaa dadwaynaha, kadibnay uu dadwaynaha u soo dhowayn lahaayeen. Qorshahan waxa kale ee uu xambaarsan yahay sidii loo ixtiraami lahaa looguna hogaansanaan lahaa xuquuqul insaanka iyo shuruucda u degsan xiligga Dagaalka. Qorshahan dagaal kasaaridu wuxuu leeyahay Xafiisyo iyo Awoodi lagu fulinlahaa oo dhamaantooda kajira Soomaaliya, Mana lamid aha Qorshani, qorshayaasha caalamiga ah ee dagaal-kasaarida dhalinta, ama hub kadhigista iyo dib-ugubiirinta bulshada. Wuxuu salka ku hayaa wada shaqeyn dhexmarta beesha caalamka, Dowladda Federaalka, degmooyina iyo bulshadaba, taas oo mid waliba leeyahay doorkeeda howleed. Dad xirfadlayaal ah oo badan iyo wadatashiyo ayaa bilaabay bishii July 2012.
Waxaana lala yeelanayey wadatashigass haya'ddo Soomaaliyeed kuwaas oo isla gartay in nabad waarta lagu heli karo oo kelya marka si nabadi ay ku disantahay wadahadal loola yeesho dadka dagaalamaya loona abuuro fursado kale ee ay ugu noolaan karaan si rayid ah. Shir lagu qabtay Muqdishu bishii Agoosto 2, 2012, ayna ka qaybgaleen dad badan oo ay khuseeyaan arrimahan, ayaa dib u eegis ku sameeyay habka caadiga ah ee looga Howlgalo arrimahan. Waxaana ka shiray arrimahan Guddiyo ka socday Wasaaradaha kana hadlaayay Arrimaha khuseeya Dadka dagaalka iska daayay. Waxaana Shir-gudoominaayay Xafiiska Raiisul Wasaaraha. Sida hadda loo sameeyey miisaaniyada, qiyaastii $ 19 malyuun, ayaa ku baxaysa qorshaha jiheynta dhalinta hubeysan, wuxuuna qiyaas ahaan aad ooga yaryahay kharajka joogtada ah ee hadda kubaxaya Amisom iyo hay'adaha amniga iyo kahortaga-argagaxisa.